Lower abdominal exercises for women at home: manfaat campuran kunyit dan madu
manfaat campuran kunyit dan madu Abamuru nke saffron ma ọ bụ turmeric na -emekarị na-akpọ pụrụ iche . Turmeric e nwere n'asụsụ Latịn aha Curcuma longa osisi bụ otu ose dị n'ọtụtụ ebe dị Indonesia ndị ọzọ Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na mpaghara.
O nwere ike iji adreesị a dum nso nsogbu , turmeric nwekwara ike a ga-eji mma ọgwụgwọ ndị dị otú ahụ dị ka iwepu ihe otutu ruo whiten anụahụ. Otu n'ime ihe dị mkpa n'akụkụ ẹdude ke turmeric ma ọ bụ turmeric bụ curcumin . Ntre nso idi ufọn na nrụpụta ọrụ nke turmeric ? Lelee na agụmagụ n'okpuru,
Ebe a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị na nrụpụta ọrụ nke turmeric ilebara a dum nso nsogbu ahụ.
Turmeric nwere ike iji dochie nrekasi obi
Turmeric pụrụ igbochi nje na-efe efe ga-enyere inyeaka soreness ke afo akpata nrekasi obi na ndị ọzọ digestive nsogbu.
Kunyi pụrụ ịgwọ ọrịa ụkwara na sie na ginger na aja aja shuga ahụ brewed . Ịṅụ otu ugboro n'ụbọchị mgbe nri ruo mgbe ị ụkwara gwọrọ .
Ginger pụrụ imeri ihe mgbe oge na -esi Ísì Ọjọọ -abịa ọnwa
E wezụga na -enwe ike ịnagide a fishy isi n'oge nanso , turmeric nwekwara ike ẹkedori sonyere ọnwa na otú e si na-aṅụ na mgbe niile.
Iji merie tonsils
Na tonsils bụ otu n'ime ndị akpịrị na nsogbu nke bụ nnọọ ize ndụ na ike ịkpata ọnwụ. Ọ bụrụ na ọ fọdụrụ naanị N'ezie, nwere ike na-egbochi gị kwa ụbọchị na -eme ihe . Ị nwere ike isa ya iji turmeric , saffron puree otú ahụ na- mmiri. Ikpokọta na lemon na mmanụ aṅụ na . Na-aṅụ kwa ụbọchị inikiet tonsils ga- agbasaghị gbadaa .
Iji ikwado ara
ASI bụ mkpa a chọrọ maka nwata, ị kwesịrị ị na -eme ka gị onwe gị ogwu turmeric na ikwado ara. N'ihi na ọ bụrụ na ị zụrụ ya na ntabi , e nwere egwu preservatives ndị na-emerụ gị na nwa .
Turmeric ike inhibit tumo mmepe
Iji nwee ike inhibit uto nke etuto ahụ na cancer mkpụrụ ndụ , i nwere ike iji na-acha ọcha turmeric . Olee otú a ga- iwesa ụbọchị ọ bụla ma ọ bụ na-atụ aro iji zere ọdụdụ oriri menu .
Aka ịnagide ihe otutu
Otu ụzọ tufuo ihe otutu ndammana bụ iji turmeric . I nwere ike ide ya dị ka nkpuchi ma ọ bụ ọnụ, ala akọrọ na ihe otutu ga- ga- efu.
Ihe ndị si na agwa bu mma n'ihi na ọ bụ ihe di ntakiri mmetụta otú ọ na odi mfe anyị oriri . Yana uru nke dragọn ahụ mkpụrụ nakwa bụ ngwaahịa nke okike. Jisie !